1 Ihe E Mere 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 24:1-31
24 E kere ụmụ Erọn n’ìgwè n’ìgwè. Ụmụ Erọn bụ Nedab+ na Abaịhu+ na Elieza+ na Ịtama.+ 2 Otú ọ dị, Nedab na Abaịhu+ nwụrụ n’ihu nna ha,+ ha amụtaghịkwa ụmụ, ma Elieza+ na Ịtama nọgidere na-arụ ọrụ dị ka ndị nchụàjà. 3 Devid, nakwa Zedọk+ onye si n’agbụrụ Elieza, nakwa Ahimelek+ onye si n’agbụrụ Ịtama wee kee ha n’ìgwè n’ìgwè maka ọrụ ha n’ozi ha ga na-eje.+ 4 Ma a hụrụ na ụmụ Elieza nwere ọtụtụ ndị isi karịa ụmụ Ịtama. Ha wee kee ha, kenye ụmụ Elieza mmadụ iri na isii ịbụ ndị isi nke ọnụmara ha, kenyekwa ụmụ Ịtama mmadụ asatọ ịbụ ndị isi nke ọnụmara ha. 5 Ha kekwara ha site n’ife nza,+ ma ndị nke mbụ ma ndị nke abụọ, n’ihi na a ghaghị isi n’ụmụ Elieza nakwa n’ụmụ Ịtama nweta ndị isi nke ebe nsọ+ na ndị isi ga na-ejere ezi Chineke ozi. 6 Shemaya nwa Netanel bụ́ odeakwụkwọ+ ndị Livaị wee dee aha ha n’akwụkwọ n’ihu eze na ndị isi na Zedọk+ bụ́ onye nchụàjà na Ahimelek+ nwa Abayata+ nakwa ndị isi nke ndị bụ́ nna ndị nchụàjà nakwa nna ndị Livaị,+ e wee họrọ otu ọnụmara maka Elieza,+ họrọkwa otu ọnụmara maka Ịtama.+ 7 Nza ahụ e fere wee ma ha: nke mbụ mara Jehoyarib;+ nke abụọ ama Jedeya, 8 nke atọ ama Herim, nke anọ ama Seorim, 9 nke ise ama Malkaịja, nke isii ama Mijamin, 10 nke asaa ama Hakọz, nke asatọ ama Abaịja,+ 11 nke itoolu ama Jeshụa, nke iri ama Shekanaya, 12 nke iri na otu ama Elayashib, nke iri na abụọ ama Jekim, 13 nke iri na atọ ama Họpa, nke iri na anọ ama Jeshebiab, 14 nke iri na ise ama Bilga, nke iri na isii ama Ịma, 15 nke iri na asaa ama Hiza, nke iri na asatọ ama Hapizez, 16 nke iri na itoolu ama Petahaya, nke iri abụọ ama Jehezkel, 17 nke iri abụọ na otu ama Jekin, nke iri abụọ na abụọ ama Gemọl, 18 nke iri abụọ na atọ ama Deleya, nke iri abụọ na anọ ama Meazaya. 19 Ndị a bụ ndokwa+ e meere ha maka ọrụ ha,+ ka ha wee na-abata n’ụlọ Jehova dị ka ihe ruuru ha+ site n’aka Erọn nna nna ha si dị, dị nnọọ ka Jehova bụ́ Chineke Izrel nyere ya n’iwu. 20 N’ime ndị fọdụrụ n’ụmụ Livaị, n’ime ụmụ Amram,+ e nwere Shubael;+ n’ime ụmụ Shubael, e nwere Jediya; 21 n’ime ụmụ Rehabaya:+ e nwere Ịs-shaya bụ onyeisi n’ụmụ Rehabaya; 22 n’ime ụmụ Izha,+ e nwere Shelomọt;+ n’ime ụmụ Shelomọt, e nwere Jehat; 23 n’ime ụmụ Hibrọn,+ e nwere Jeraya+ bụ́ onyeisi, Amaraya bụ́ onye nke abụọ, Jahazayel bụ́ onye nke atọ, Jekamiam bụ́ onye nke anọ. 24 Ụmụ Ọziel bụ Maịka; n’ime ụmụ Maịka,+ e nwere Shemia. 25 Nwanne Maịka bụ Ịs-shaya; n’ime ụmụ Ịs-shaya, e nwere Zekaraya. 26 Ụmụ Meraraị+ bụ Malaị+ na Mushaị;+ ụmụ Jaazaya bụ Bino. 27 Ndị a bụ ụmụ Meraraị: n’ime ụmụ Jaazaya, e nwere Bino na Shoham na Zakọ na Ibraị. 28 N’ime ụmụ Malaị, e nwere Elieza, bụ́ onye na-amụtaghị nwoke.+ 29 N’ime ụmụ Kish: ụmụ Kish bụ Jeramiel. 30 Ụmụ Mushaị bụ Malaị+ na Ida na Jerimọt.+ Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Livaị, n’ọnụmara n’ọnụmara ha.+ 31 Ha onwe ha wee fee nza+ kpọmkwem dị ka ụmụnne ha bụ́ ụmụ Erọn mere n’ihu Devid bụ́ eze nakwa n’ihu Zedọk na Ahimelek na ndị isi ọnụmara ndị nchụàjà na ndị Livaị. Ma ọnụmara+ nke onye bụ́ onyeisi na ọnụmara nke nwanne ya nke nta hà.
1 Ihe E Mere 24